ပုစွန် ချဉ်ပေါင်ဟင်းရည် – Thet Nandar
ဒယ်ဒီ ချက်သော ပုစွန် ချဉ်ပေါင် ချဉ်ရည်ဟင်း
နူးနူးအိအိ .. အသားများများ … ဘဲသားဆီပြန်ဟင်း
ဒါလည်း .. ဒီနေ့ Sunday ပိတ်ရက် .. ဒယ်ဒီ ချက်သော ငပိရည် ….
ထမင်းမစားခင် ဒယ်ဒီ ချက်ထားသော ဟင်းများကို မာမီက အဆင့်သင့် ခူးစားဖို့ ဟင်းအိုး အဖုံးများကို ဖွင့်ပီး ဓာတ်ပုံ အမှတ်တရ ရိုက်ထားတာ …
ဒီမှာ ၀ယ်လို့ရသော ချဉ်ပေါင်ရွက် ဈေးနှုန်း
ဒီက ရိုးတံနီ ချဉ်ပေါင်ရွက်
အဲဒီ Food Zone Super Market ကလေ … ကိုယ်တို့ ရန်ကုန်က City Mart Super Market လိုမျိုးပဲ .. Delivery ရှိတယ် ….
ရန်ကုန်က City Mart မှာ .. ကိုယ် ၂၀၀၂ လောက်က ဖုန်းဆက်ပီး အိမ်ကို လာပို့ခိုင်းတယ် …
Delivery က အဲဒီ အချိန်တုန်းက … နှစ်သောင်း နှင့် နှစ်သောင်းအထက် ဆိုရင် Delivery Free
ရန်ကုန်မှာ ဗုံး ၃ နေရာ ဆက်တိုက်ပေါက်ပီး ၂၀၀၅ ပတ်ဝန်းကျင် ကျတော့ သုံးသောင်း နှင့် သုံးသောင်းအထက် ဖြစ်သွားတယ် …. အဲဒါဆို Delivery Free
၂၀၀၇ လောက်ကျတော့ အိမ်ဘေးနားမှာ city mart မို့လို့ … ပို့စရာ မလိုတော့ဘူး ….
City Mart က ၀န်ထမ်းတွေက ဈေးဝယ်လာတဲ့ ပလတ်စတစ်အထုပ် တွေကို အိမ်အောက်ထပ်ထိ လိုက်ပို့ပေးတယ် … ကိုယ့်က ခလေး တဖက်နဲ့မို့ ၀ယ်နေကျ ဖောက်သည်မို့လို့ service ကောင်းကောင်းပေးတာလည်း ပါသလို … မြန်မာ့စိတ်ရင်းနဲ့ ကလေးတဖက်နဲ့ ဈေးဝယ်အထုပ်တွေ အများကြီး သယ်ရမှာမို့ … အိမ်အောက်ထပ်ထိ လိုက်ပို့ပေးတာလည်း ပါ ပါတယ် … City Mart Staff တွေကို ပို့ခ မုန့်ဖိုး ပေးတာတောင် မယူဘူး …
၀န်ထမ်းတွေကို စနစ်တကျ Training လုပ်ပေးထားတာ အရမ်းကောင်းတယ် …
City Mart က Gift Card ကလည်း သုံးရတာ အဆင်ပြေတယ် … အဲဒီ အချိန်တုန်းက ခလေး တဖက် ချီထားတာဆိုတော့ လက်တဖက်က မအားဘူး ပိုက်ဆံတွေ ဘာတွေ မရည်တွက်နိုင်ဘူး … City Mart က Gift Card ပေးလိုက်ရုံပဲ … အဲဒီ အချိန်တုန်းက ငွေအကြွေတွေက ဟောင်းနွမ်းတာလည်း ပါတယ် …
အဲလို ဖုန်းဆက်မှာပီး ၀ယ်တော့ ကိုယ့်နာမည်က city mart member အလိုလို နေရင်း member ၀င်နေပီး … တနှစ်တခါ လက်ဆောင် ပို့ပေးတယ် … city mart က diary book လည်း ရဖူးတယ် …
ကိုယ် ဒီကို လာခါနီးတုန်းကတော့ city mart က နေ ဖုန်း နှင့် ဈေးဝယ်ရင် …. ၁ သိန်း နှင့် ၁ သိန်း အထက် ( အဲဒီ အောက် .. ဈေးဝယ်တာဆိုရင်တော့ ပို့ခ ( ကားခ ) ပေးရတယ် )
ဒီက Food Zone က ဒေါ်လာ ၅၀ ဖိုး နှင့် အထက် ၀ယ်ရင် အိမ်တိုင်ရာရောက် ပို့ပေးတယ် … Delivery Free …
April 22, 2012 Thet Nandar